निर्जीबन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन र दाबी भुक्तानी घट्यो ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > निर्जीबन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन र दाबी भुक्तानी घट्यो !
निर्जीबन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन र दाबी भुक्तानी घट्यो !
काठमाडौं । कोरोनाको महामारीको समयमा पनि निर्जीबन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क आर्जन, दाबी भुक्तानी र बीमालेखा जारीमा अपेक्षाकृत प्रगति गरेको देखिएको छ । तर कोरोनाको महामारी कम हुँदै जाँदा भने बीमा लेखको संख्यामा बढोत्तरी देखिएपनि बीमा शुल्क आर्जन र दाबी भुक्तानी भने सुस्ताउन थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा आईपुग्दा जारी बीमा लेखको संख्या बढेपनि बीमा शुल्क आर्जन र दाबी भुक्तानी भने सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १६ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
यो चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ८ अर्ब ३० करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा दोस्रो त्रैमासमा आईपुग्दा यो रकम २३ करोड ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँले घटेको छ । दोस्रो त्रैमासमा ८ अर्ब ६ करोड ६६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
यस्तै यो अवधिमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी पनि घटेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा आईपुग्दा ३ अर्ब ६५ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
तीन महिनामा निर्जीबन बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी २ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँले घटेको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमास सम्ममा आईपुग्दा ७ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै कम्पनीहरुको जारी बीमा लेखको संख्या भने बढेको छ । चालु आवको ६ महिनामा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १५ लाख ३४ हजार २१८ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । जसमा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ७ लाख ५३ हजार २३६ वटा बीमा लेख जारी गरेका थिए ।
यस्तै दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले ७ लाख ८० हजार ९८२ बीमा लेख जारी गरेका छन् । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले सम्पती, सामुद्रिक, हवाई, मोटर, कृषि तथा बाली, लघु साथै अन्य विविध बीमा गर्दै आएका छन् ।
२०७७ चैत्र १ गते १८:१५ मा प्रकाशित
प्रभु क्यापिटलले दियो चितवनमा २ सयलाई सेयर बजारको आधारभूत तालिम
नेप्सेमा यी तीन कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
१६.९० अंकले बढ्यो नेप्से, नेपाल लाइफ र ग्रामिण विकासमा लोभिए लगानीकर्ता
नेकपाका नाममा स्थिरता विरूद्ध चलखेल : प्रेस सल्लाहकार थापा
मेरो माइक्रोफाइनान्सको १०० प्रतिशत हकप्रद खुला, कुल पूँजी कति ?